Izinzuzo eziyi-10 Wonke Amabhizinisi Amancane Ayazi Ngecebo Lokumaketha Ngedijithali | Martech Zone
We uxoxe noScott Brinker mayelana nengqungquthela yakhe ezayo ye-Marketing Technology, iMartech. Enye yezinto engixoxe ngayo inani lamabhizinisi angasebenzisi amasu ngoba isu lawo lamanje Isebenza. Anginakungabaza ukuthi izinkampani ezinezibonelo ezinhle izwi lomlomo amaklayenti, angaba nebhizinisi elikhulayo nelichumayo. Kepha lokho akusho ukuthi isu lokumaketha ledijithali ngeke libasize.
A isu lokumaketha ye-digital ingasiza amathemba abo ekucwaningeni ngesinqumo sokuthenga, ingasiza ekunciphiseni ingcindezi emnyangweni wezentengiso, inganciphisa umjikelezo wokuthengisa, futhi ingasiza inkampani ukuthi ikufanelekele lokho kuthengisa. Akukona okuningi ukuthi lokho okwenzayo kuyasebenza noma cha, yilokho ongakwenzi okuvame ukusiza inkampani ukuthi iphumelele ngokwengeziwe futhi igcwalise lezo zikhala. Ukutholwa, ukugcinwa kanye nama-upsell kungaba lula kakhulu ngecebo elihle lokukhangisa ledijithali.
I-CJG Digital Marketing uhlanganise lezi Zinzuzo eziyi-10 Zokumakethwa Kwedijithali Kwebhizinisi Elincane:
Ukumaketha Kwedijithali Kukuxhuma Nabathengi ku-Intanethi
Ukumaketha Kwedijithali Kukhiqiza Amanani Okuguqulwa Okuphakeme
Ukumaketha Kwedijithali Konga Imali
Ukumaketha kwedijithali kunika amandla isevisi yamakhasimende yesikhathi sangempela
Ukumaketha Kwedijithali Kukuxhuma Nomsebenzisi Weselula
Ukumaketha Kwedijithali Kusiza Ukukhiqiza Imali Ephakeme
I-Digital Marketing Iletha i-ROI Ephakeme Emikhankasweni Yakho
Ukumaketha Kwedijithali Kukugcina Usendaweni Elingana Nabancintisana
Ukumaketha Kwedijithali Kungakusiza Ukuncintisana Namabhizinisi Amakhulu
Ukumaketha Kwedijithali Kukulungiselela I Inthanethi Things
Abathengi abangafika kuma-72% sebevele baxhuma nemikhiqizo ngeziteshi zabo ezahlukahlukene zokumaketha kwedijithali nemisebenzi ngokusho kwemibiko evela kuMashable. Kepha okuxakayo naphezu kokuthi abathengi nabaninimabhizinisi ngokufanayo bashintshela emzileni wedijithali, amabhizinisi amaningi amancane asephuza ukukhetha lo mkhuba. UJomer Gregorio, ukumaketha kwedijithali kweCJG
Tags: izinzuzoI-CJG Digital Marketingizinzuzo zokumaketha ezidijithaliisu lokumaketha ye-digitalinfographicibhizinisi eliphakathi nendawoIbhizinisi elincanesmb